Guri Iska Dumay, iyo Baabuur iska Gadoomay! M. Haaruun.
Home	Wararka Af Soomaaliga	English News	Bogga Qoraaa	Arimaha Bulshada	Cayaaraha	Breaking News Wasiira Beeraha Somaliland Oo Kormeer Ku Sameeyay Beeraha Baki Iyo Boorama Oo Dhibaatooyin Soo Wajaheen (Video Ama ...	- Wednesday, 22 May 2013 14:49	Maayarka Degmada Boorama Oo Ka Mahad Celiyey Sidii Looga Qayb Qaatay Xuskii 18 May (Video Ama Akhri)	- Wednesday, 22 May 2013 13:05	Safiirka Austarelia:Inay Soo Noqdaan Jaaliyadda Puntland Ee Austaralia Ku Nooli, Waxay Qayb Ka Tahay Xalka lagu ...	- Tuesday, 21 May 2013 16:28	Khudbaddii Taariikhiga Ahayd Ee Madaxweyne Ku Xigeenka Somaliland, Mudane C/Raxmaan C/laahi Ismaaciil Ka Jeediyay ...	- Tuesday, 21 May 2013 15:11	Dhagyso Ehelada Soomaali Lagu Maxkamadeeyey wadanka Marayanka Wiigii Ina Dhaafay Oo dareenkooga Cabiraya (Dhagaysi)	- Monday, 20 May 2013 21:12	Thursday, 16 May 2013 03:55	Guri Iska Dumay, iyo Baabuur iska Gadoomay! M. Haaruun.
Waa Didar Hossain. Waa geesi danyar ah oo wadnihiisu aanu galawda aqoonin. Shilkii maantii dhawayd na, 35 qof buu badbaadiyay, saddex ayaamood na gurmad buu ku jiray isagoo aan daqiiqad seexanin. Dadkii ku hoos jiray burburka ee uu badbaadiyay, saddex ka mid ah, midba gacan ama lug buu ka gooyay ka dib markii uu ka kicin kari waayay biro ku jiifay.
Sida saaxiibadiisii dhawaan ku haligmay aqalka ka soo hor jeeda midka uu ka shaqeeyo, amaba, uu adoonka ka yahay, ayuu isna dharka ku tolaa warshad ay jeebwaynta Reer-Galbeedku dharka ka jilmataan. Dukaamada waawayn ee Primark oo UK ah, Loblaw oo Canada ah, iyo PWT oo Danish ka ah baa qaata dharkaas jaban, ee nafaha badan galaafta. Ilaahay uun baan isaga aqalkaas dumay ee lagu haligmay galinin, laakiin se halka uu joogaa middan waxba ma dhaanto.
Sida la ogyahay, caalamka oo dhan shilalka baabuurta ee ka dhaca, boqolkiiba sideetan (80%), iyo ka badan, waxa sabab buuxda u ah qalad aadame - (human error), Somaliland na waa la mid, waxay se kaga duwantahay, cid masuuliyad doonaysa inay qaadato ayaan jirin. Kolka caalamka kale la garab dhigo, dhulkeena baabuur badani ma joogto, safarro dhaadheer oo kumanaan KM ah na lama galo, laakiin intii yarayd ee meesha joogtay baa dadkii ku dhamaaday. Hadaan is idhaaho soo tiri inta anigu aan magacyadooda aqaano, ee jidkaas Hargeysa-Berbera ku shuf-beeshay oo qudha, dhawr goor bay iga gadman tiradu. Dhamaantood Ilaahay ha u naxariisto, laakiin se su'aal baa meeshan taala. Miyaynu diyaar u nahay inaan shilalkan badan wax ka barano?
Wadamada caalamka badankooda, waxa la ogaaday, sharciyo adag na laga soo saaray, inaanu baabuur-waduhu tel ka gacanta (mobile phone) ku hadli karin, fariin qoraal ah na diri karin isagoo wadada saaran. Waxa la ogaaday inuu isticmaalka mobile ku sababo shilal badan, khasaare badan ka dib na, go'aan baa laga gaadhay, waana laga raystay. Sidoo kale, waxa la ogaaday, in suunka kuraasta ku yaala (seat belt) oo la xidhaa ay halis badan daawo u tahay. Suun kaasi, oo aan dhulka Soomaalida iyo carabaha ba laga isticmaalini wuxu keenaa, kolka hore na loo sameeyayba, inuu qofka baabuurka saaran kursiga ku hayo, wax kasta oo dhacaba. Kolka baabuuradu ay is hirdiyaan, iyo xataa hadii baabuurka aad saarantahay joojiyaha xoog loo qabto ba, waxa jirta halis ah inuu qofka aan suunka xidhnayni muraayadda hore ka boodo. Taas macnaheedu waxa weeye, inay waxyaabo si sahlan loo samayn karaa nafo badan badbaadin karaan. Mobile ka oo isticmaalkiisa la joojiyo, dadka oo suumanka badbaadada goor kastaba xidha, tirada dadka baabuurta la saaraayo oo lagu xadido inta u baabuurku qaadi karo, si miyir qabta oo baabuurka loo wado, iwm, cidna kuma adka, caawimo debedeed iyo ictiraaf na uma baahna. Masuuliyiinta iyo dadka caadiga ah ba hadaad la sheekaysato, oo duruufaha lagu jiro kala hadasho, waxa badanka marmarsiiyo ahaan laguu siinayaa jawaabta ah - "Dee wadan la aqoonsanyahay miyaynu nahay!”
Isku soo duub, laba su’aalood, oo mataano ah baa muhiim ah in la is waydiiyo - Shilalka maxaa badankooda sababa, wax se ma laga qaban karaa? Labadaasu ma kala hadhi karaan hadii xal la doonaayo. Hadii kale na, waxaynu odhan, "Wadadaas jin baa fadhiya!", Xaalkuna wuxu iska ahaan, - guri iska dumay, iyo baabuur iska gadoomay!
Daawo Siyaasi Ciise Oo Maanta Nahaayda U Dhiibay Maayarka Degmada Borama Iyo Suldaanka Dhalinyaradda SL (Video) »
back to top	Warar Kale Nin Lagu Dilay Xaafadda Woolich Ee London
Political Videos. Suaalo Lala Boobay Labada Prof Ee Samatar Iyo Galyr Waraysi Cabdi Ismaaciil Samatar
Wararkii U Danbeeyey Nin Lagu Dilay Xaafadda Woolich Ee London
HNN. A federal judge on Tuesday declined to reconsider the lengthy prison terms he imposed…	Read more...	Jaaliyada Soomaaliyeed Ee Ku Nool Dalka Ingiriiska Oo Lagu Wargelinayo In Ay Ka Soo Qeyb Galaan Baroordiiq Loo Sameynayo Dr. Cumar Cismaan Raabi.